» SAWIRO: Madaxweynaha dowlada oo Istanbul kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga
SAWIRO: Madaxweynaha dowlada oo Istanbul kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga
December 5, 2012 - Written by maamule - Edited bymaamule ShareMadaxweynaha dalka Turkiga ayaa qaabilay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sh Maxamuud oo safar ku jooga gudaha dalkaas, iyadoona ay ka wada hadleen arimo baadn.
Abdalla guul iyo Xasan Sh Maxamuud ayaa ka wada hadlay arimo badan oo ku aadan xariirka labada dal iyo kaalmada ay xukumada dalkaas la garab taagan tahay shacabka Soomaaliyeed.
Madaxweynaha Soomaaliya ayaa lagu soo wareejiyay qaar kamid ah dhismooyinka waa weyn ee kuyaal dalkaas Turkiga gaar ahaan magaalada caasimada ah ee Istanbul.
Xasan Sh Maxamuud ayaa kulamo kala duwan la yeelan doona madaxda dalkaas iyo Soomaalida isugu jirta Jaaliyada iyo ardayda ee dalkaas kusugan.
5 Responses to SAWIRO: Madaxweynaha dowlada oo Istanbul kula kulmay dhigiisa dalka Turkiga
wadani somaliyeed says:	December 5, 2012 at 19:54	madaxweynaheena sharafta leh kudadaal sidii aad dalka ooga saari laheyd dhamaanba ciidamada shisheeye kuna badal ciidamo somaliyeed waxeynu kaa sugnaaba waa wax qabad fiican shaqada adag ee aad umada somaliyeed uheyso allah kula garab galo
Reply	u are not me says:	December 5, 2012 at 20:27	u madaxwayne plz iskadaa hana kumashquulin kismaayo iyo jubland kumashquul kana shaqee danaha umada soomaaliyeed hadiikale waxaad soo jiidan doontaa magacxumo iyo sharaf dhac asc
Reply	Axmed says:	December 5, 2012 at 22:21	madaxweynaha soomaaliya waxaan u arkaa muwaadin si dhab ah u dadaalaya haddii uu ku guuleysto inuu abuuro ciidan soomaaliyeed oo awoodleh oo daboolikara baahida dowladda guuli uma dhimana
Reply	Maxamed yusuf gurxan says:	December 6, 2012 at 09:32	Labo kala bariday kala warla muwaandinow xaal qaado hadi aad aqrisaten shaley qodobada ugu doorka roon waxaa kamid ahaa qodobka 3xaad wuxu ka hadlayey madaxweynaha iyo gudoomiyaha barlaman iyo ismaacil cumar geele waxa ay sameeyen mida kale urur ladhahayo sahal ayaa war bixin koo kasoo diyaariyey fadlan dib ugu labta qodobadi shaley hadi aad rabtin inad ogatan qiyanada madaxweynada iyo gudomiyana iyo ismcl cumar gele
Reply	Nasru diin says:	December 6, 2012 at 14:23	Adiga iyo sahalba laboduli ayaad tihiin sahalka aadshegeyso ma aha urur waxaweye dad qabil daroogo kunoqday manafirinayan antii fayow adaa jirane oo ayagokalahe fir firso haduu waxkuu qaban karo